Home Wararka Biyaha Fatahaada Wabiga Shabeelle oo gudaha u soo galay Magaalada Baladweyne
Biyaha Fatahaada Wabiga Shabeelle oo gudaha u soo galay Magaalada Baladweyne
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne, Wabiga Shabeelle ayaa fatahaad ku sameeyay Xaafadda Xaawo Taako kadib markii biyo raacay Keliga Dhagax-Jebis ay karkaarada jabsadeen sida Mustaqbal ay u xaqiijiyeen qaar kamid ah dadka xaafaddaas.
Qoysaska ayaa bilaabay in ay ka barakacaan guryahooda kadib markii cabsida lasoo deristay ay xooggeysatay maadaama wabiga uu bilaabay in uu fatahaad ku sameeyo, welwelka ugu weyn ee sababay barakacooda waa ka fogaanta go’doon ay galaan.
Digniin uu soosaaray maamulka Gobolka Hiiraan maalmo kahor waxa uu ku muujiyay in biyo badan uu keenay Wabiga Shabeelle sidaas awgeed loo baahan yahay in laga hortago kahor inta aanay karkaarada jabsan.
Guddiga kahortagga Fatahaadda Wabiga ayaa sameeyay carro-tuur xooggan si ay u celiyaan biyaha Wabiga isla markaana looga hortago fatahaad saameyn taban ku reebtay Shacabka Magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
DG Hir-Shabeelle Guddiga uu u xilsaaray fatahaadda Wabiga waxa uu sheegay in uu gacan maran yahay kadib markii dhaqaalaha Xukuumadda u ballanqaaday ay bixin weysay Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya inkasta oo uu eedeyntaas iska fogeeyay Wasiir Beyle.